मेरो साथी टि भी – mero sathi tv
Category: मेरो साथी टि भी
११ बैशाख २०७५, मंगलवार १०:५५ April 24, 2018
LeaveaComment on महिलाको भेषमा देखिएका पुरुष
पोखरा । राजेन्द्र नेपालीको अर्काे नाम हो पोख्रेली धुर्मुस । उनि अहिले यति परिचयले मात्र सिमित छैनन् । मेला महोत्सबमा कलाकारहरुको व्यस्तताले गर्दा पनि होला अहिले कलाकारलाई पर्दामा भन्दा फरक देख्न दर्शक चाहन्छन् । दर्शकलाई मनोरञ्जन दिनका लागि पोख्रेली धुर्मुस महिलाको भेषमा देखिएका छन् । यसै क्रममा एक अन्तरवार्ताको क्रममा उनि महिलाको भेषमा नै उभिए […]
२१ चैत्र २०७४, बुधबार १६:१८ April 4, 2018
LeaveaComment on ६० वर्षका बुढाहरुलाई ज्योति मगरले यसरि संगै नचाइन (भिडियो)
६० वर्षका बुढाहरुलाई ज्योति मगरले यसरि संगै नचाइन (भिडियो) ﻿
५ चैत्र २०७४, सोमबार १२:१० March 19, 2018
LeaveaComment on आँचलको जन्मदिनमा पलले दिएनन् शुभकामना
अभिनेत्रि आँचल शर्माले आफ्नो २१ औं जन्मदिन मनाएकीछन् । रेडियो अडियोले शत्रुगते टिम सहित आँचलको जन्मदिन मनाएको हो । यसैक्रममा पल शाहले उनलाई जन्मदिनको शुभकामना भने दिएनन् कार्यक्रममा रमाइलो गर्ने क्रममा आँचलले पल शाहलाई घुर्कि समेत देखाएकी थिइनन् । ‘नाईं नभन्नू ल ४’ बाट रजतपटमा डेव्यु गरेकी आँचलको युवा पुस्ता माझ आफ्नै क्रेज छ । […]
५ चैत्र २०७४, सोमबार १०:४६ March 19, 2018
LeaveaComment on ‘म मदिरा सेवन गर्दिन’आँचल शर्मा
पोखरा । अभिनेत्रि आँचल शर्माले एक पछि अर्काे राम्रो व्यनरबाट एका एक हिट फिल्म दिइरहेकी छन् । आँचल नाम मात्रले होइन व्यवहारले पनि आँचल बनेकी छन् । काठमाडौंमा आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुको प्रश्नले आचललाई दुखित समेत बनायो । उनलाई मदिराको बिषयमा प्रश्न गर्दा आफु मधिरा सेवन नगर्ने भन्दै उनको जवाफमा उनले बेड शिन सम्म पनि […]
२ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०४:४१ March 16, 2018
LeaveaComment on स्वस्तिमाकी आमा प्रियंका,र फुप वर्षा तर मानिन् वर्षाले (भिडियो हेर्नुहोस )
पोखरा । नाई न भन्नु ल ५ बन्ने लगभग पक्का भएको छ । नेपाली सिनेमा इतिहासमा सबैभन्दा बढि सिक्वेल बनेको चलचित्रमा यसलाई लिन सकिन्छ । चलचित्रमा केहि पुराना कलाकारहरु दोहोरीएका छन् भने केहि यो व्यानरका लागि नयाँ हुनेछन् । बिकाश आर्चाकृत व्यनरमा बन्न लागेको चलचित्रमा पुराना कलाकार अनुभव रेग्मी , प्रियंका कार्कि दोहोरीका छन् भने […]
१ चैत्र २०७४, बिहीबार १२:०० March 15, 2018
LeaveaComment on धुर्मुस-सुन्तली ‘बर्ष व्यक्ति’मा सम्मानित
‘फिल्मीखबर’ साप्ताहिकले आफ्नो नवौं बार्षिकोत्सवको अवसर पारेर बर्ष व्यक्ति पुरुष र महिला पनि घोषणा गरि बर्ष व्यक्ति पुरुषतर्फ सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) भने, कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) लाई बर्ष व्यक्ति महिलातर्फ सम्मानित गरिएको छ । सो फिल्मीखबरले प्रत्येक वर्ष ‘फिल्मीखबर बर्ष व्यक्ति’ को रुपमा सम्मान गर्दै आइरहेको छ । सम्पादक शान्तीप्रियले अहिलेको जमानामा फिल्म सम्बन्धी साप्ताहिक पत्रिका […]
१ चैत्र २०७४, बिहीबार ११:१८ March 15, 2018
LeaveaComment on नेपाल आईडल-२ मा रीमासंगै यी नायकले गर्देछन् होस्ट, जजहरु पनि परिवर्तन भए ?
नेपाल आइडलको सजिन २ का कार्यक्रम संञ्चालकहरु परिवर्तन भएका छन् । देशकै प्रतष्ठित गायन रियालीति शो “नेपाल आईडल” को दोस्रो संस्करणको पनि तयारी सुरु भईसकेको छ । एपिवान टेलिभिजनले भित्राएको दोस्रो संस्करणका लागि प्रस्तोता फाईनल भएका छन् । “नेपाल आईडल २” को होस्ट यसअघिकी प्रस्तोता रीमा बिश्वकर्मासंगै पछिल्लो समय ‘२ रुपैयाँ’ बाट चर्चामा आएका नायक […]
गीत चोरीको आरोपमा फसे भुवन के.सि लिनेभयो ठूलो रुप (भिडियो सहित)
२३ फाल्गुन २०७४, बुधबार १२:२३ March 7, 2018
LeaveaComment on गीत चोरीको आरोपमा फसे भुवन के.सि लिनेभयो ठूलो रुप (भिडियो सहित)
सुवास गिरी र भुवन केसीले निर्माण गरेको फिल्म ‘कृ’ यतिबेला हलहरुबाट उत्रिसकेको छ । तर, यो फिल्ममा समावेश गरिएको एउटा गीतमाथि लफडा सुरु भएको छ । पुराना फिल्म निर्माता तथा निर्देशक शम्भु प्रधान आफ्नो पुरानो फिल्म ‘सम्झना’ को गीत कृमा चोरी गरिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिन पुगेका छन् । सम्झनाको ‘उकालीमा अघि अघि’ बोलको गीतलाई […]
२२ फाल्गुन २०७४, मंगलवार १५:४२ March 6, 2018
मनोरन्जन, मेरो साथी टि भी
LeaveaComment on अनुप र प्रदिपको कुरा के हो ? प्रदिपले खुलस्त पारिदिए
पोखरा । लभ स्टोरी जनरामा बनेको चलचित्र लिलिबिलीको ट्रेलर सार्वजनीक भएको छ । चलचित्रको यस अघि २ गीत सार्वजनीक भैसकेका छन् । गीत र ट्रेलरको आधारमा भन्ने हो भने चलचित्र प्रति दर्शको त्यति ध्यान गएन् । मिलन चाम्सको लगातार फिल्मको वर्षा भईरहदा लिलिबिलिले कुन स्थान पाउनेहो हेर्न बाँकीनै छ । <span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: […]
Exclusive ७५ हजार नेपालीलाई साक्षि राखेर रबिले राखे नयाँ रेकर्ड अब भारतले गर्ला ?
१९ फाल्गुन २०७४, शनिबार ११:४८ March 3, 2018
LeaveaComment on Exclusive ७५ हजार नेपालीलाई साक्षि राखेर रबिले राखे नयाँ रेकर्ड अब भारतले गर्ला ?
फागुन १९ काठमाण्डौ – शान्तिको अग्र दुत गौतम बुद्द नेपालि भूमिमा जन्मिएको हो भनि विश्व सामु प्रमाणित गर्न ५० हजार नेपालि टुडिखेल मा भेला भएर एकै साथ उहाको उपदेश वचन र दर्शन लाई वाचान गर्न आज भव्य कार्यक्रम भैरहेको छ l पप स्टार धिरज राई टेलिभिजनकर्मी रवी लामिछाने महानायक राजेश हमाल नायक निखिल उप्रेती मह […]